iTunes Kwete Kuziva iPhone? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
apple watch charger isiri kushanda
maitiro ekugadzirisa yakaderera vhoriyamu pane iphone 6
iphone 6 pamwe nematambudziko nekubata skrini
iTunes Kwete Kuziva iPhone? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Iwe wakaisa yako iPhone mukombuta yako, asi hapana chiri kuitika! Chero chikonzero, iTunes haizozivi iPhone yako. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura nei iTunes isiri kuziva yako iPhone uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Nei Isiri iTunes Kuziva Yangu iPhone?
iTunes haisi kuziva yako iPhone nekuda kwenyaya netambo yako yeMheni, yako iPhone's Mheni chiteshi, komputa yako USB chiteshi, kana software ye iPhone yako kana komputa. Matanho pazasi anokuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko kana iTunes isingazive iPhone yako!
Tarisa Yako Mheni Cable
Zvinogoneka iTunes haisi kuziva yako iPhone nekuti pane nyaya neako Mheni tambo. Kana yako Mheni tambo yakanganisika, inogona kusakwanisa kubatanidza yako iPhone kune komputa yako.
Kurumidza kuongorora yako Mheni tambo uye tarisa chero kukuvara kana kufaya. Kana iwe uchifunga kuti pane nyaya netambo yako yeMheni, edza kushandisa shamwari. Kana komputa yako iine akawanda USB madoko, edza kushandisa imwe yakasiyana.
Ndiyo Yako Cable MFi-Yakasimbiswa?
MFi-Certification iri chaizvo Apple's 'chisimbiso chekubvumirwa' kune iPhone tambo. MFi-yakasimbiswa tambo dzemheni ndidzo dzakachengeteka kushandisa ne iPhone yako.
Kazhinji kutaura, tambo dzakachipa dzaunowana kuchitoro chako chemadhora kana chiteshi chegasi haisi MFi-inosimbiswa uye inogona kukonzera kukuvara kwakanyanya ku iPhone yako. Vanogona kupisa uye kukuvadza zvemukati zvemukati zve iPhone yako.
Kana iwe uchitsvaga rakakura MFi-yakasimbiswa iPhone tambo, tarisa iwo ari mune iwo ari mukati Payette Forward's Amazon Chitoro !
iphone 6s inongoerekana yadzima
Wongorora Yako iPhone's Mheni Chiteshi
Tevere, tarisa mukati me iPhone yako Mheni chiteshi -kana yakavharwa nemarara, zvinogona kutadza kubatanidza kune vanobatanidza doko pane yako Mheni tambo.
Bata tochi uye nyatsoongorora mukati meiyo Mheni chiteshi. Kana iwe ukaona chero lint, gunk, kana imwe marara mukati meMheni chiteshi, chenesa kunze ne anti-kunofambira mberi bhurasho kana bhurasho idzva, risina kushandiswa.
iphone 6s kutsvaga chiratidzo
Kwidziridzo Kune Razvino Vhezheni ye iTunes
Kana iwe uri komputa iri kuita yekare vhezheni yeTunes, inogona kusaziva iPhone yako. Ngatitarisei kuti tione kana iTunes yekuvandudza iripo!
Kana iwe uine Mac, vhura iyo App Store uye tinya iyo Zvidzoreso tab kumusoro kwechidzitiro. Kana iTunes yekuvandudza iripo, tinya Kwidziridza kurudyi kwayo. Kana yako iTunes iri kumusoro, hausi kuzoona iyo Bhatani rekuvandudza.
Kana iwe uine Windows komputa, vhura iTunes uye tinya iyo Rubatsiro tebhu pamusoro pechiso. Wobva wadzvanya Tarisa Ongororo . Kana inogadziridza iripo, zvichitevera pa - screen zvinokurudzira kugadzirisa iTunes!
Izvo zvinogoneka diki software glitch iri kudzivirira yako iPhone kubva pakuzivikanwa ne iTunes. Tinogona kuyedza kugadzirisa iri rinogona kuitika nekutangazve yako iPhone. Maitiro ekudzima yako iPhone anoenderana nekuti ndeupi waunayo:
iPhone X : Dhinda uye ubatise zvese zviri zviviri bhatani repadivi uye nerimwe remabhatani evhoriyamu kudzimara inotsvedza yemagetsi yaonekwa. Rova zvakasimba ikoni yemagetsi kuruboshwe kurudyi kuvhara yako iPhone. Mushure memasekondi mashoma, pinda uye bata chete bhatani repadivi kusvikira iyo logo yeApple yapenya pakati pekona.
Dzimwe Dzimwe iPhones : Dhinda uye ubatise bhatani remagetsi kusvika slide kumagetsi kudzima rinoratidzika. Rova zvakasimba chena uye tsvuku simba kuvake kubva kuruboshwe kurudyi kudzima iPhone wako. Mira masekondi mashoma, wobva wadzvanya wabata bhatani remagetsi kudzamara waona iyo logo yeApple pachiratidziri.
Paunenge uripo, edza kudzorerazve komputa yako futi. Izvo zvinokanganisawo kubhuroka kwesoftware, izvo zvinogona kudzivirira iTunes kubva pakuziva yako iPhone.
Ita shuwa Iwe Bata 'Vimba Iyi Computer'
Nguva nenguva, iwe uchaona pop-up iyo inobvunza kana iwe uchida kuti yako iPhone i 'Vimba' komputa yako. Iyi pop-up inogara ichioneka kekutanga iwe paunobatanidza yako iPhone kune itsva komputa. Nokuvimba kombiyuta yako, uri kupa iPhone yako kukwanisa kushamwaridzana neTunes.
Pane mukana iTunes haazive iPhone yako nekuti haina kuvimba komputa yako. Kana iwe ukaona iyo 'Vimba Iyi Computer?' pop-up, gara uchirovera Vimba kana iri yako komputa!
chii chinonzi iphone yezvidhina
Ini Netsaona Ndakabaya 'Usavimbe'!
Kana iwe netsaona ukarova 'Usatenda' kana iyo yekuvandudza yaonekwa, enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Gadziridza Nzvimbo & Yakavanzika .
Inotevera, nguva yaunobatanidza yako iPhone kune komputa yako, iwe uchaona iyo 'Vimba Iyi Computer?' pop-up zvakare. Ino nguva, ita shuwa kuti pombi Vimba !
Gadziridza Software Yako Komputa
Makomputa anomhanyisa shanduro dzekare dze software anogona pano neapo kumhanya mune madiki glitches uye mabugs. Kugadziridza kune yazvino vhezheni yesoftware yekombuta yako inzira yekukurumidza yekuedza kugadzirisa dambudziko.
Kana iwe uine Mac, tinya Apple logo mune yekumusoro kuruboshwe-kona yekona. Wobva wadzvanya Nezve Iyi Mac -> Software Gadziriso . Kana inogadziridza iripo, tinya Kwidziridza . Kana zvisiri kugadzirisa zviripo, enda padanho rinotevera!
maitiro ekurasa voicemail pane iphone
Kana iwe usina Mac, tarisa chinyorwa chedu chinotarisa zvakanyanya paPC kugadzirisa . Matanho sekudzorerazve Apple Nhare Chidimbu Mutyairi USB dzimwe nguva kugadzirisa dambudziko kana iTunes isiri kuziva yako iPhone.
Tarisa Yako Mac's System Ruzivo kana System System
Kana iTunes ikaramba kusaziva iPhone yako, pane imwe yekupedzisira software yekugadzirisa nhanho yatinogona kutora. Tichatarisa yako iPhone's System Information kana System Report kuti uone yako iPhone inoratidzika pasi peiyo USB kifaa muti.
Kutanga, bata pasi Sarudzo kiyi uye tinya Apple logo pane yekumusoro kuruboshwe-kona yekona uye tinya Ruzivo rweSystem kana System Chirevo . Kana yako Mac ichiti System Information, tinya System Report kana pop-up yaonekwa.
Iye zvino zvaunenge uri muSystem Report screen, tinya sarudzo yeUSB kuruboshwe rwechiso.
Kana yako iPhone isingaonekwe mune ino menyu, panogona kunge paine nyaya yehardware inodzivirira iTunes kubva pakuziva yako iPhone. Inogona kunge iri nyaya neako Mheni tambo, chiteshi che USB, kana chiteshi chekuchaja pane yako iPhone. Ini ndichavhara izvi mune zvakadzama mune inotevera nhanho!
Kana iPhone yako ikaonekwa mune ino menyu, pane yechitatu-bato software inodzivirira yako iPhone kubva pakuzivikanwa ne iTunes. Nguva yakawanda yenguva, yechitatu-bato software imwe yemhando yekuchengetedza chirongwa. Tarisa uone Apple's giraidhi pane kugadzirisa nyaya pakati pechitatu-bato software zvirongwa uye iTunes kune rumwe rubatsiro.
yangu ipad 2 haikunde
Kana iTunes ichiri isingazive yako iPhone, inguva yekufunga nezvesarudzo dzekugadzirisa. Parizvino, ndinovimba ndakakubatsira kuti uone chiri kukonzera dambudziko. Kana iri yako Mheni tambo, iwe uchafanirwa kuwana imwe nyowani kana kukwereta imwe kubva kushamwari. Iwe unogona kukwanisa kutora imwe yekutsiva tambo kubva kuApple Chitoro kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare +.
Kana iri chiteshi che USB, ungatofanira kugadzirisa komputa yako kana pasina zviteshi zveUSB zviri kushanda. Zvinogonekawo kuti iyo USB yekupedzisira yeiyo yako iPhone's Mheni tambo ndiyo dambudziko, saka ita shuwa kuti waedza kubatanidza akawanda madhijitari kune komputa yako kuburikidza ne USB chiteshi.
Kana yako iPhone's Mheni chiteshi iri kukonzera dambudziko, ungangodaro kuti uigadzirise. Kana yako iPhone yakafukidzwa neAppleCare +, ronga musangano paGenius Bar uye tungamira kuApple Store yako.
Kana yako iPhone isina kuvharwa neAppleCare +, kana kana iwe uchida kuti igadziriswe nekukasira, tinokurudzira Pulse . Puls ikambani inodikanwa yekugadzirisa iyo inotumira nyanzvi inosimbiswa yakananga kwauri. Vachagadzirisa yako iPhone pa-iyo-iyo uye iyo yekugadzirisa ichafukidzwa nehupenyu hwewarandi!
Ini ndinokuziva iwe izvozvi!
iTunes iri kuziva yako iPhone zvakare uye iwe unogona pakupedzisira kuenzanisa. Inotevera nguva iTunes isiri kuziva yako iPhone, iwe unozonyatsoziva maitiro ekugadzirisa dambudziko! Siya mhinduro pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako iPhone.